Hopitaly Huashan mifandraika amin'ny Oniversite Fudan - siansa sy teknolojia Technology Doneax CO., LTD
Hopitaly Huashan mifandray amin'ny Oniversite Fudan
Ny hopitaly Huashan mifandray amin'ny Fudan University dia any Shanghai, manodidina ny 50 mu ny velarany. Niorina tamin'ny taona 1907. Izy io dia hopitaly feno ambaratonga fahatelo manambatra ny fitsaboana, fampianarana ary fikarohana, ary singa iray fiantohana ara-pitsaboana any Shanghai.
Ny hopitaly dia manana fifehezana manan-danja 10: neurosurgery, fandidiana tanana, Neurology, Epidemiology, fitsaboana nentim-paharazana sinoa sy tandrefana, urolojia, nefology, departemanta kardiovia, fitsaboana amin'ny sary ary fitsaboana nokleary ary fandidiana ankapobeny. Orthopaedika, mpitsabo mpanampy, laboratoara, laboratoara manan-danja (fandidiana tanana), laboratoara fanalahidy (antibiotika), endocrinology, neurosurgery, fandidiana tanana, neurolojia, fitsaboana sinoa nentim-paharazana (aretin'ny havokavoka), dermatology, urology, nephrology, fandidiana, gastroenterology, oncology, infection, fitsaboana fanarenana, fitsaboana ara-panatanjahantena, sary ara-pahasalamana 20 manan-danja indrindra. Misy ivontoerana fanaraha-maso kalitao 7 any amin'ny fivarotam-panafody klinika, neurolojia, dermatolojia, fitsaboana amin'ny laser, fitsaboana nokleary, diagnostika momba ny aretina amin'ny asa ary neurosurgery, foibe fiaraha-miasa amin'ny fikarohana sy fanofanana 1 WHO, ary laboratoara manan-danja 20, ivon-toeram-pikarohana sy ivontoerana fikarohana isan-karazany.
Ny hopitaly dia manana fandriana 1216 nankatoavina, miaraka amin'ny PET / CT voafaritra tsara, résonance magnétialy 3.0intraoperative, radiosurgery, antsy gamma, 256rows of CT, SPECT, DSA, rafitra elektronika fitarafana (EBIS), rafitra ultrasound color Doppler, antsy antsy, antsy ultrasonika, X-antsy, lithotripter onja onja, fitaovana hafainganina ary fitaovana fitsaboana hafa.
Tamin'ny volana septambra 2020, nanapa-kevitra ny Komitin'ny antoko kaominaly ao Shanghai sy ny governemanta monisipaly fa hanome azy ny anaram-boninahitra "Shanghai Advanced Group amin'ny ady amin'ny valan'aretina COVID-19".